SAWIRRO:-Madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay qoyska Cali Mahdi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan tacsi ah la qaatay ubadka, qoyska iyo qaraabada Madaxweynihii Hore ee Dalka Marxuum Cali Mahdi Maxamed oo shalay aas qaran loogu sameeyey Muqdisho.
Farmaajo ayaa la wadaagay ubadka, qoyska iyo qaraabada Marxuumka in maamuuska Qaran ee Dowladda Soomaaliya ay u sameysay Madaxweyne Cali Mahdi ay ka tarjumeyso sida shacabka iyo dowladda ay u xasuusan yihiin doorkii uu ka qaatay dowladnimada iyo hoggaaminta Dalka.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo wiilasha Marxuumka Liibaan Cali Mahdi iyo Mahdi Cali Mahdi ayaa uga mahadceliyey Madaxda iyo Hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya maqaamka sarreeyey ee lagu soo dhaweeyey iyo Aaska Qaran ee loo sameeyey Madaxweynihii hore ee Dalka.
Allaha u naxariistee Cali Mahdi ayaa Isbitaal ku yaalla Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ugu geeriyooday Cudurka halista ah ee COVID-19 oo ku dhacay, waxaana uu ahaa Madaxweynihii 4-aad ee Soomaaliya.
Waddooyinka qaar ee Magaalada Muqdisho oo Maanta xiran